Vatomandry maimaim-poana: pejy 29 tsy azonao adino | Famoronana an-tserasera
Ny sary Vector dia manana toetra maromaro izay ataovy izy ireo ny atiny tsara indrindra ampiasaina amin'ny famolavolana pejy web, fampiharana na fitaovana. Avelany hampitombo ny habeny izy ireo nefa tsy very kalitao, ary izany no nahatonga azy ireo ho lasa ilaina amin'ny karazana fampiasana rehetra amin'ny famolavolana tranonkala.
Misy iray andiana pejin-tranonkala an-tserasera de manolora karazan-tsarimihetsika maimaim-poana ary izany dia hahafahanao manampy an'io kalitao fanampiny io amin'ny famolavolana ny tranokalanao na asa rehetra tokony hataonao ho an'ny mpanjifa, na iza izany na iza.
18 Sarintany Vector maimaim-poana
20 Mariky an'izao tontolo izao
22 Saripika sotro
24 Vector mangatsiaka
26 StockUn Unlimited
27 Archive Free Vector
28 Vector maimaim-poana
Ahitana karazana sary maro an'isa marobe ao, ary eo amin'izy ireo no ahitantsika ireo volo maimaim-poana. Ianao dia afaka midira amin'ny fitsarana tsy maharitra 7 andro ahafahanao manamarina ny kalitaon'ny atiny rehetra atolotray. Ao amin'ny repertoire misy azy ny hatsaran-toetra lehibe, ka amin'izany andro izany dia azonao atao ny mameno ny angon-tsarinao hananana tolotra bebe kokoa ho an'ireo mpanjifanao miasa miaraka aminao.
Tsarovy izany avy eo ianao dia handeha amin'ny fandoavam-bola isam-bolana hiditra amin'ny atiny rehetra, noho izany ny 7 andro dia hamela anao hanapa-kevitra raha toa ka mendrika ny mandoa izay ilainao amin'ny asanao.
Una amin'ireo tolotra vector maimaim-poana lehibe indrindra ho an'ny fampiasana manokana sy ara-barotra. Hita amin'ny endrika AI sy EPS, Freepik dia manome anao ny fahazoana miditra amin'ireo volo malaza indrindra sy ankehitriny, ary koa mankany amin'ny lisitr'ireo sokajy misy azy.
Ankehitriny dia hanontany tena ianao hoe aiza no misy ny fikafika maherin'ny 260 arivo ireo vakaka ato amin'ity tranonkala ity. Raha tsy mandalo ny fizahana ianao, dia tsy maintsy manome voninahitra ny tranonkala ianao mba hampiasa ilay sary maimaimpoana izay noraisinao ho fahatsiarovana ao anaty ny solosainao. Tolo-kevitra mahaliana ho an'ny asa sasany manokana. Ary raha mila vektor matetika ianao dia tolotra mahaliana aroson'ity tranonkala ity.
iray hafa ny tranonkala par tsara indrindra ho an'ny vektor maimaim-poana ary izay fantatra amin'ny anarana hoe VectorOpenStock. Hanana sary vektor maimaim-poana an'arivony voalamina tsara amin'ny sokajy ianao.
Manana zava-baovao manaitra toy ny mpamoaka lahatsoratra an-tserasera izay mamela anao hanamboatra endrika vector Ao amin'ny navigateur, amboary ny layout ary ampio singa vaovao sy ny safidy hanovana zavatra toy ny loko sy ny soratra.
iray hafa endri-tsoratra saika tsy misy fetra misy ireo vektor maimaim-poana marobe ary ny karazana atiny rehetra toy ny fihetsika, borosy, endritsoratra ary sary. Ny iray amin'ireo hatsaram-panahiny lehibe indrindra dia ny fampiasàna ny sariny rehetra maimaimpoana ho an'ny tena manokana ary ny ankamaroany dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra.
Ka, araka ny azonao lazaina, dia efa manam-potoana hamakivakiana ity tranonkala ity ianao tototry ny karazana atiny rehetra mety amin'ny asa ny famolavolana.
Toy ny loharano teo aloha, ny Vector4Free dia tsy manana fanitarana lehibe ny vakoka maimaim-poana. Aleo izy ireo 1.500 eo ho eo no voafantina tsara kalitao tsara izay manavaka azy amin'ny tranonkala hafa izay mirona hanana atiny bebe kokoa.
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka azy dia izany milamina tsara ny zava-drehetra ary afaka mitady vector manokana ianao afaka segondra. Maimaimpoana ny sary vector rehetra raha ampiasana manokana, fa raha te hampiasa azy ireo amin'ny tanjona ara-barotra ianao dia tsy maintsy ho avy ianao hijery raha mety izany.
Nandalo tranokala natokana ho an'ny fiotazam-boaloboka izahay, mba hanana nifantoka tamin'ny sary famantarana marika fanta-daza miaraka amin'ny 9 mahery ary sary famantarana marika 3.000 hafa. Tranonkala iray tena manokana hitady an'io sary famantarana ilaina amin'ny asa an-tserasera io.
Tsarovy izany Manana izany amin'ny endrika SVG ianao, ary koa JPG sy PNG. Manamora ny fitadiavana koa izy io, noho izany dia lasa iray amin'ireo tranokala manokana ireo.
Piots Adam Kwiatkowski manolotra sary masina tsy manam-paharoa 300 izay ho tonga lafatra amin'ny karazana asa rehetra amin'ny fampiharana na lampihazo. Na dia tsy lisitra malalaka misy vakoka maimaim-poana aza izy rehetra dia maimaim-poana amin'ny fampiasana ara-barotra sy manokana. Ny hany zavatra tsy azo ampiasaina hamarotana azy ireo indray.
Vetivety maimaim-poana 280.000 no isan'ny atiny marina izay azonao idirana avy amin'ny Vector.me. Ny tena antony fisiany dia ny milina fikarohana ny vorona maimaim-poana izay mampiasa fanangonana tena feno, azo alaina amin'ny fikarohana. Ny fizarana logo sy sary dia azo idirana misaraka.
Avy amin'ity tranonkala ity efa niresaka tamin'ny fotoana vitsivitsy tao amin'ny Creativos Online izahay, ary araky ny tondroin'ny anarany dia mitodika any amin'ny mpampiasa sy mpamorona mikaroka sary masina. Ny database dia misy ny sary masina maimaim-poana amin'ny endrika PNG, SVG, EPS, PSD ary BASE 64. Ny iray amin'ireo tanjany dia hita amin'ny karazany isan-karazany, ka ho solon'ny sisa amin'ity fidirana ity dia mandresy integer maro izy.
Tranonkala iray hafa mikendry ny mpamorona te hanana lehibe karazana seti-kisary tsy manam-paharoa, sary vongana ary modely ho an'ny tranonkala. Manolotra atiny maimaimpoana ho an'izay maniry hampiasa azy io na ho an'ny tena manokana na ho an'ny fampiasana ara-barotra.
Es Soso-kevitra ny hamaky ny teny momba ny tranonkala hampiasa vector maimaim-poana. Tranonkala misy fomba manokana hanampiana ny tiana.
Ao amin'ny fomba bilaogy, Snap2objetcs dia manolotra andian-toetra tsara izay ankafizina amin'ny fidirana amin'ny karazana atiny rehetra manomboka amin'ny zavatra mety ho mpitari-dalana mankany amin'izay tadiavintsika, fonosana volo maimaim-poana. Na dia toa tsy maintsy mikaroka amin'ny alàlan'ny fidirana samihafa aza izahay, ity tranonkala ity dia manana vektor marobe maimaimpoana ho fampiasanao.
Azontsika atao ny manasongadina fa manana isika sary vongana ho an'i New York, Paris, London, Moskoa ary Tokyo. Zavatra tsy dia mora hita ary eto no ananantsika.
Araka ny tondroin'ny anarany, vorona an'arivony maimaim-poana no azonao ampiasaina mahazo sary, borosy, gradien, endritsoratra ary maro hafa. Manana ny noforoniny manana kalitao avo lenta izy ireo, noho izany, afaka minitra vitsy dia ho hitanao ilay vector izay nandanianao vola be hitadiavana ary azo antoka fa 1001FreeDownloads no ao amin'ny tranonkalany.
Sarotra ny manavaka ny tranonkala sasany izay manana anarana mitovy amin'izany, satria mety hitranga amin'ny FreeVector.net izany, na dia misy aza ny fanavahana azy vondron'olona tia vector malalaka, azonao atao ny manavaka azy amin'ny ambiny mba hahalalanao azy tsara.
Ny vektor vao nampiana dia eo an-tampony, azo maimaim-poana.
Un bilaogy famoronana tantanan'ny mpamorona Franz Jeitz Ary izany, na dia tsy manana safidin-tsarimihetsika malalaka aza, dia misy manaitra ihany koa raha raisina. Midika izany fa ny vektor rehetra izay ahitanao harena sarobidy dia tsara, noho izany dia manatevin-daharana an'ity lisitra ity izahay noho ny fananana sary sary tsara indrindra eto amin'ny tranonkala. Tena ilaina azontsika lazaina.
Una amin'ireo vondrom-piarahamonina mpanakanto lehibe indrindra amin'ny tranonkala sy fanta-daza eo amin'ny tontolon'ny famolavolana. Ity tranonkala ity dia feno atiny maimaimpoana sy loharano avo lenta, na dia anisan'ny hatsaram-panahy lehibe indrindra aza ny fanitarana lehibe ny repertoire-ny, ny fitadiavana zavatra manokana indrindra dia mety mandreraka.
La bara fitadiavana no ho mpiara-dia aminao lehibe indrindra hahitana vector manokana. Ny zavatra tsara indrindra dia ny faharetana kely dia afaka mahita sary avo lenta ianao.
Ahoana ny fomba ahafahany mivezivezy amin'ny alàlan'ny interface, ny an'ny Vectorportal iray amin'ireo famantarana mahatonga antsika hahita fa voalamina tsara ity tranonkala ity ary mifantoka amin'ny sary maimaimpoana. Izy io dia manana sivana fikarohana ary manana fanitarana lehibe amin'ny karazana zavakanto rehetra, miaraka amin'ny adjective 'vector'.
Andao hifantoka amin'ny andiana fanangonana vector misy habe kely hikarohana amin'ny alalàn'ny voalohany izay hanome lalana ny fahaizana mamorona tsipika ao amin'ny Illustrator CS6. Midika izany fa ho lasa zavatra iray izy io.
Ity tranonkala ity dia manana fahasamihafana amin'ny ankamaroan'ity lisitra ity, ho an'ny loharano sasany dia tsy maintsy mamaky ilay boaty ianao, na dia misy maimaim-poana koa aza.
Sarintany Vector maimaim-poana
toerana natokana ho an'ny sarintany vector misy fisintomana maimaimpoana, ka manjary lasa toerana manokana. Na firenena, kontinanta, na an'izao tontolo izao, ny Free Vector Maps dia manome voro-tsarimihetsika tsy misy tranonkala hafa.
Manohy miaraka amina andian-tranonkala voatondro ho an'ny typography izahay. FontSpace dia manana vorona maimaim-poana marobe ho an'ny fampiasana azy manokana sy ireo izay azo ampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra rehefa apetraka eo amboniny ny pointer totozy.
Raha tadiavinao ny iray sary famantarana manokana momba ny orinasa na serivisyToy ny Google Plus sy marika teknolojia hafa, Brands of the World no toerana mety indrindra hahitana azy ireo. Manana azy ireo amin'ny vahaolana avo lenta izy ireo mba hahitan'izy ireo ny tsara indrindra amin'ny tranokalanao an-tserasera na asa sasany ataonao ho an'ny mpanjifanao.
Tranonkala natokana ho an'ny volo maimaim-poana amin'ny akanjo isan-karazany, mitovy bebe kokoa amin'ny T-shirt. Mora ny misintona ireo modely tonga lafatra ireo hampifangaro ireo endrika noforoninao.
Miverina amin'ny atao hoe bilaogy isika, amin'ity indray mitoraka ity, avy amin'ny mpamorona Chris Spoone, izay miavaka amin'ny andiana volo malalaka. Mahaliana izany azonao ampidirina ny feed RSS mba hihaino tsara ireo fidirana vaovao izay nalaina avy amin'ity bilaogy ity ho an'ireo mpamorona sy mpampiasa izay manomboka ny diany eo amin'ny tontolon'ny famolavolana.
Tsy afaka manome toky an'izany isika Ireo vakoka maimaim-poana rehetra ho hitanao dia misy kalitao tsara, fa tranonkala be mpitia ity. Midika izany fa tsy maintsy 'misitrika kely' ianao amin'ny alàlan'ny ranon'i Vecteezy raha te hahita vector izay tianao hitondrana ilay tetik'asa vaovao. Mazava ho azy, amin'ny maha mpanjono mahay anao dia afaka manangona zavatra ianao ho setrin'izany.
Miasa kosa amin'ny maha-tranonkala ahitan'ny vondron'olona mpamorona ny vector halefa any amin'ireo tranonkala hafa ahafahanao misintona sasany. Ka voalaza tsara fa ivelany daholo ny atiny ho hitanao.
Afaka sahirana indray isika amin'ny tranonkala iray hafa izay manana 'vector' amin'ny anarany. Izy io dia manana amboaran-tsarimihetsika fandoavam-bola, fa koa manana maimaim-poana voafantina tsara. Azo alaina amin'ny endrika EPS, tsy maintsy mamorona kaonty fotsiny ianao hanombohana misintona sy mampiasa azy ireo amin'ny asanao.
Miaraka amina endrika mahavariana raha vao jerena, StockUn Unlimited dia manolotra sary vektor marobe. Izy io dia manana ny fampahalalana ilaina amin'ny zavatra alaina amin'ny fotoana rehetra. Tranonkala iray hafa izay manana loharano tena mahaliana.
Archive Free Vector
Misongadina amin'ny famoriam-bola be dia be amin'ny vector miaraka amin'ny fitaovana ilaina hitadiavana ilay tadiavinay. eFA sivana samy hafa amin'ny loko, lohahevitra, laza na karazana rakitra. Tsy toy ny All-Silhouettes, tsy misy dokam-barotra io, mba hahafahanao mitety tranonkala mora foana.
Amin'ny ankapobeny dia ho hitanao 16.000 eo ho eo ny vektor maimaim-poana azo alaina, noho izany dia mijoro ho tranonkala manan-danja tokoa izy ho an'ity karazana sary ity. Misafidiana sokajy iray ary hanana ny fanangonana tadiavina eny an-tananao ianao na amin'ny kitikitry ny totozy.
Tranonkala iray malaza be, na dia misy ny loharanom-pahalalana isan-karazany toy ny sary aza loharanom-baovao misokatra, manana fizarana vector maimaimpoana koa izy io. Manolotra karazam-baovao rehetra momba ny fanapahan-kevitra, ny karazana rakitra ary ny isan'ny fampidinana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Ireo pejy 29 tsara indrindra ahazoana ireo volo maimaimpoana
Studios famoronana sary malaza